‘पशुपति घुम्न पाइन्छ भनेर आएको, खाना मीठो लाग्यो !’ – Nepal Press
काठमाडौंको आमसभामा तराईवासी
‘पशुपति घुम्न पाइन्छ भनेर आएको, खाना मीठो लाग्यो !’
२०७७ माघ २८ गते १९:१२
काठमाडौं । प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले काठमाडौंमा गरेको विरोधसभामा सहभागी हुन आएकी विनिशा चौधरी नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनअघि भेटिइन् । सर्लाहीबाट पहिलोपटक काठमाडौं आएकी विनिशालाई आन्दोलनको कुनै मतलब थिएन । काठमाडौंको दृश्यमा भुलिरहेकी विनिशाले भनिन्– पहिलोचोटि काठमाडौं आएको रमाइलो लागिरहेको छ । मैले सोचेभन्दा काठमाडौ धेरै फरक रहेछ ।
उनी विरोधसभामा मान्छे ल्याउन रिजर्भ गरिएको गाडी चढेर काठमाडौं आएकी हुन् । तर उनलाई कसले केका लागि निशुल्क काठमाडौं ल्यायो थाहा छैन । ‘गाउँका एकजना नेताले काठमाडौं जाऔं भने, आएँ’, सित्तैमा काठमाडौं देख्न पाउने भएपछि नआउने कुरै भएन ।’
विनिशा आएको गाडी तीनकुनेमा पार्किङ गरियो । त्यहाँबाट हिंड्दै बानेश्वर थापागाउँस्थित अर्पण पार्टी प्यालेसमा लगियो । शहरको दृश्यमा रमाइरहेकी विनिशा पार्टी प्यालेसको खाना खान पाउँदा झन् मख्ख परिन् ।
खाना खाएर विनिशाको एक टोली पशुपतिनाथ दर्शन गर्न जाने तयारीमा बानेश्वर चोक आएकाे थियाे । उनीहरु टेप्पो चढेर गौशालातिर गए ।
प्रचण्ड–माधव समूहले सर्लाहीबाट मात्रै ७७ वटा गाडीमा मान्छे काठमाडौं ल्याएको थियो । रिजर्भ गाडीमा आउने धेरै मान्छे पहिलोपटक काठमाडौं आएका रहेछन् ।
थापा गाउँस्थित अर्पण पार्टी प्यालेसमै भेटिइन्, धनुषाकी पार्वती यादव । खाना खाएर सुस्ताइरहेकी पार्वतीको छेवैमा दुई–चार वटा झोला थिए । जुन उनले काठमाडौंमै कारखाना खोलेर बसेका छोराका लागि कोसेली ल्याइदिएकी रहिछन् ।
पहिलोचोटि काठमाडौं आएकी यादवले भनिन्– छोरा यहीं आउँछु भनेको छ, त्यसैले कुरिरहेको ।
उनलाई कसले कुन कार्यक्रममा लागि ल्याएको भन्ने थाहा छैन । गाडीभाडा नपर्ने, सित्तैमा खान पाइने र काठमाडौं हेर्न पाउने लोभमा लहैलहैमा काठमाडौं आएकी रहिछन् ।
लामो बसको यात्रा गरेर आएका अधिकांश जुलुसमा जाने मनस्थितिमा थिएनन् । थकित मुद्रामा भेटिएका उनीहरुलाई जुलुसमा लैजान स्थानीय नेताले ताकेता गरिरहेका थिए ।
धनुषाबाट मात्रै सभामा सहभागी गराउन ७० वटा बसमा मान्छे ल्याइएको थियो ।
अर्पण पार्टी प्यालेसमा खाना खान पनि सजिलो भने थिएन । जिल्लैपिच्छेको फरक–फरक टिम रहेछ । टिकटको व्यवस्था भए पनि गाउँबाट आएकाहरु आफू कता जाने, कुन टोलीमा मिसिएर खाना खाने भन्ने अन्योलमा थिए ।
पार्टी प्यालेस बाहिर जिल्लाका नेता कुन गाउँपालिकाबाट कति जना आए ? भन्दै हिसाब गरिरहेका थिए ।
खाना खाइसकेका एक हुल आन्दोलनमा सहभागी हुन भृकुटीमण्डपतिर लागे । उनीहरुलाई पछयाउँदै हिंड्यौं, हामी ।
उनीहरु मञ्च अघिल्तिर गएर बसे । नेताले के बोले ? उनीहरुलाई मतलब थिएन । बरु एकछिन आराम गर्न पाएकोमा आनन्द लिइरहेका थिए ।
अनुषादेवी पासवान पनि रातभर बसको यात्रा गरेर काठमाडौं आइपुगेकी हुन् । उनलाई पनि काठमाडौं आएका बेला पशुपति दर्शन गर्ने रहर रहेछ । तर, उनी जान पाइनन् । उनी पट्यारै मानेर भए पनि नेताका भाषण सुनिरहेकी थिइन् ।
‘मेयरले जौं भनेर आएको हो’ पासवानले भनिन्, ‘आएको बेला काठमाडौं घुमौंला भन्ठानेको थिएँ, मिलेन ।’ उनलाई संसद भनेको के हो ? भन्ने पनि थाहा रहेनछ । तर उनले भनिन्, ‘मेरो छोराले प्रधानमन्त्रीले नराम्रो काम गरेको भन्नू भनेको छ ।’
सभामै भेटिएकी विनिता यादव । स्थानीय निर्वाचनमा उपमेयर उठेर हारेकी उनी भन्दै थिइन्– विरोध पनि हुने, रमाइलो पनि हुने । अरु त त्यस्तै हो, खाना चैं खुब मीठो लाग्यो ।
उनी दोस्रोपटक काठमाडौं आएकी रहिछन् ।
सिरहाको लहानबाट मंगलबार राति ९ बजे हिंडेको बस बुधबार बिहान १२ बजे काठमाडौं आइपुग्यो ।
यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । मधेशका जिल्लाबाट विरोधसभामा आएका अधिकांशलाई राजनीति वा आन्दोलनबारे खासै केही थाहा छैन । सित्तैमा घुम्ने, खाने र रमाइलो गर्ने उद्देश्यबाट धेरै मान्छे काठमाडौं आएका रहेछन् । कतिपयले काठमाडौं आएका बेला आफ्ना निजी काम पनि गर्ने योजना बनाएका रहेछन् ।
प्रकाशित: २०७७ माघ २८ गते १९:१२
One thought on “‘पशुपति घुम्न पाइन्छ भनेर आएको, खाना मीठो लाग्यो !’”
kehi din agi Oli ko julus ma ni thiye holan ni yasta manchhe ta… khai ta padhna payeeyena ni…